Maalinta: Abriil 20, 2019
Maareeyaha Guud ee Cusub ee SAMULAŞ!
Enver Sedat Tamgacı, oo asal ahaan ka soo jeeda Samsun, ayaa loo magacaabay Maareeyaha Guud ee shirkadda MOTAŞ, shirkadda gaadiidka dadweynaha ee Magaaladda Metropolitan District, iyo Maareeyaha Guud ee SAMULAŞ A.Ş., oo ah shirkad ku leh degmada Samsun Metropolitan District. Malatya [More ...]
Cusboonaysiinta Garoonka diyaaradaha Erzurum
Howlaha dayactirka garoonka diyaaradaha ee Erzurum Airport ayaa la bilaabay. Baaxadda howluhu dhexdooda, beddelaadda 08L madaxa wadooyinka toosan ee heerarka CAT III ayaa la dhammaystiri doonaa. 4 cm oo ah waddo la taaban karo oo ay sabab u tahay jabka la taaban karo iyo diirka dushiisa ee marinka jira ee jira [More ...]
4 Daryeelka Maalmeedka Maalmeedka ah ee Cusub ee Yenimahalle Sentepe Teleferik
Gaariga fiilada qaada ee rakaabka qaada inta udhaxeysa Yenimahalle metro Station iyo Şentepe ayaa maanta la xirayaa shaqooyin dayactir xilliyeed ah. Yenimahalle-Şentepe Cable Car Line 20 Abriil - 23 Abriil muddada dayactirka sanadlaha ah ee u dhexeeya 2019 [More ...]
Anatolia 'Jilbada One Way' waa in lagu muujiyaa
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Cahit Turhan, "Mid ka mid ah Belt Road One Project" by sheegaya muhiimadda ay leedahay juqraafiga ee Turkey in xilliyada soo socda sii kordhi doonto, "Anatolia, Caucasus iyo Central Asia ee saddexagalka [More ...]
Mashruuca Channel Istanbul ee la joojiyay? Dollar Noocyada Mashruuca Mashruuca!
Mashruuca Kanal İstanbul, oo lagu dhawaaqay in si joogto ah loo qabanayo laakiin aan la xaraashin, ayaa u muuqda inuu ku xayiran yahay sarrifka doollarka! All Canal Istanbul ee Turkey si aad u dabasocon by gundhigga filayo mashruuca [More ...]
Agaasimaha Guud ee Gaadiidka TCDD ee Arikan ayaa loo doortay Guddiga Waddooyinka Dhexdhexaadinta Dhexdhexaadinta
Golaha Guud iyo shirarka kooxeed ee wada shaqaynta ee Wadada Waddo Gaadiidka Caalamiga ah (TITR), ee loogu yeero Wadada Dhexe, ayaa lagu qabtay Kiev, Caasimadda Ukraine. Wadada Gaadiidka Caalamiga ah ee Unda Trans-Caspian (TITR) [More ...]
TÜVASAŞ wuxuu qabsadey aqoon-isweydaarsiga gudaha ee ku jira barashada cilmi-baarista qorshaha istaraatiijiga ah
“Aqoon-isweydaarsiga Dhex-dhexaadka ah ee gudaha, mid ka mid ah marxaladaha muhiimka ah ee Qorshaha Istaraatiijiyadeed ee TÜVASAŞ 2020-2024 muddada, waxaa lagu qabtay Sakarya Sen Hotel iyada oo ay hoos imaanayso“ TÜBİTAK-TUSSİDE ”. Mabaadi'da aasaasiga ah iyo siyaasadaha TÜVASAŞ, ujeeddooyinka dhexdhexaadka ah iyo kuwa muddada-dheer iyo [More ...]
Yandex Navigation si ay u muujiyaan jidadka iyo jidadka kale ee socdaalka madaxweynaha
Xnumx.cumhurbaşkanlıg of Baaskiil Tour ee Turkey (Tur) waxaa la qaban doonaa in Sakarya iyo Istanbul, 55 172.4 kiiloomitir. iyo marxaladda ugu dambeysa ee 6 ayaa la qaban doonaa Axadda bisha Abriil. Qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Istanbul ayaa ku jiri doona taraafikada inta lagu guda jiro safarka oo ku dhamaan doona fagaaraha taariikhiga ah ee Sultanahmet. [More ...]
Bandhiga Bandhiga Mersin
Shirka jaraa’id ee Dalxiiska Caalamiga ah ee Tour Of Mersin, oo ay yeelan doonto Dowladda Hoose ee Magaalada Mersin sannadkan, ayaa waxaa qabtay ka qeyb galka Duqa Magaalada Mersin ee Magaalada Vahap Seçer. Madaxweynuhu wuxuu doortaa dhammaan muwaadiniinta 5 [More ...]
2019 Koobka Adduunka ee Koobka Adduunka ayaa ku bilowday Alanya
World Paragliding Target Championship 28, oo ay martigeliso Alanya, ayaa lagu qabtaa aagga duullimaadka Hıdırellez iyada oo ay ka qaybgalayaan ciyaartooyda 130 ee ka socda dalka. 21 wuxuu socon doonaa ilaa Abriil Axadda wadarta guud ee duullimaadyada 7 [More ...]
Maanta taariikhda: 20 April 1911 Kadem-i Shariif-Damascus
Taariikh Maanta Maanta 20 April 1911 Khad-i Sharif Shariif-Damascus ayaa la dhisay, bilowguna wuxuu bilaabay dhismaha xadiidka Hejaz ee xarunta dhexe ee Dimishiq.